DEG DEG:- Qarax xoogan ayaa gilgilay Qalbiga Caasmida muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG DEG:- Qarax xoogan ayaa gilgilay Qalbiga Caasmida muqdisho
Ahmed weheliye Gaashaan 29 January 2019 29 January 2019
Qarax laga wada maqlay magaalada muqdisho ayaa goor dhaw ka dhacay Qalbiga caasimada.
Meel u dhaw Taalada daljirka Dahsoon Qasaaraha weli lama oga Goobta qaraxa ka dhacay ayaa waxaa laga cabsi qabaa inuu dab ka dhasho Gadiidka Gurmadka deg dega iyo Dab damiska gobolka ayaa gaaray goobta.
Ilawareedyo Goobta ka dhaw ayaa mareeg u sheegay in qaraxa uu yahay gaari lala beegsaday Kontaroolka jilacoow
Waxii kusoo kordha isha ku haay mareeg.com
Maxaa Garowe kud dhexmaray MD Farmaajo iyo Madaxda M/Goboleedyada?
GOBOLKA BARI:- Maxuu Salka Ku Hayaa Dagaalka Daacish Iyo Shabaab ?